version 0.6.2 – သေးငယ်တဲ့သကြားလုံးတွေအများကြီး
သြဂုတ်လ 9, 2010 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 24 comments
ကောင်းသောအရာသေးသေး packages များအတွက်လာ
ဒီဗားရှင်းကိုသေးငယ်တဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုအတော်လေးကြီးမားတဲ့အစုံပါဝင်, မှစ. 0.6.0 အချို့ Iron လိုအပ်ပါလိမ့်မည်အနည်းငယ်သောအချက်များရှိလိမ့်မယ်လို့အတော်လေးအချို့ခဲ့တာဟာအဓိကလွှတ်ပေးရန်ခဲ့သည်, နဲ့ options တွေအများကြီးဆော့ဗ်ဝဲကိုတိုးတက်စေရန်, bit နဲ့အားဖြင့် bit နဲ့.
သင်အနည်းငယ်ဘာသာစကားများအတွက်ဘလော့ဂ်ရေးသားနေတယ်ဆိုရင်, သို့မဟုတ်တဘာသာစကားဖြင့်ရေးသား Preferences ကစာရေးဆရာများနှင့်အခြားသူများပကတိကိုအခြားသူများရှိသည်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးမတူညီသောဘာသာစကားသုံးပြီးအဖြစ်ပြီးပြည့်စုံပို့စ်အထိမ်းအမှတ်ယခုဖြစ်နိုင် (ကျနော်တို့မူလကတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားတွင်ဒီ post ကိုရေးဖို့ထင်, ဒါပေမယ့်ဆန့်ကျင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့). တစ်ပို့စ် marking ယခု၏ထုံးစံကိုလယ်ထည့်ခြင်းအားဖြင့်ပြုသောအမှုကား tp_language နှင့်ဘာသာစကားတန်ဖိုး ထား.. အဟောင်းတွေအာဘော်များဒီအလွန်ရန်ပုံငွေမဖြစ်အံ့သောငှါသတိပြုမိ ယူ. fixed ခံရဖို့လိုပါလိမ့်မယ်.
နောက်ထပ် feature ကိုဆေးကြောသန့်စင်-up ကဟောင်းများကိုစက်ဖြင့်အလိုအလျောက်ဘာသာပြန်ချက်များကိုသင့်ရဲ့ဒေတာဘေ့စကနေနိုင်စွမ်းသည်, တစ်ခုခုကိုလုံးဝ, ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်ထက်အသက်ကြီးဒါမှမဟုတ်အဲဒီ (google မှာဘာသာပြန်ချက် cache လုပ်ဝေါဟာရများနှင့်အတူလိုက်လျောဖို့အစဉ်အဆက်ချင်? ယခုသင်လုပ်နိုင်သည်), ဒါကစမတ်လမ်း၌ပြစ်မှားမိသည်, လူ့ဘာသာပြန်ချက်များကိုပယ်ဖျက်မထားရာ, နှင့်လူ့ဘာသာပြန်ချက်များကိုဖြင့်အစားထိုးခဲ့ကြသည်ကိုလည်းအလိုအလျှောက်ဘာသာပြန်ချက်များကိုကိုးကားများအတွက်ဘာသာပြန်ချက်မှတ်တမ်းတွင်သိမ်းဆည်းထားကြပါတယ်. ဒီသုံးတဲ့အခါအသုံးပြုသူသမ္မာသတိအကြံပေးသည်, တစ် backup လုပ်ထားလို့မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဘယ်တော့မှမဖြစ်.
code ကိုတစ်ဦးကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူအခြားသော plugins တိုက်မှုကို minimize လုပ်ဖို့ပြုလေ၏, ယခုအားလုံး functions တွေနဲ့အဆက်မပြတ် static နဲ့အတန်းသို့ပြောင်းရွှေ့အဖြစ်, ပြဿနာများ၏ဒီအမျိုးအစားတချို့ plugins နှင့်အတူအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်, နှင့်ယခု ok ဖြစ်သင့်.
ကျနော်တို့ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် ယာသုန်, revonorway, တာရိန်းစ်, မာတင် နှင့်အခြားမည်သူမဆိုသူတို့အကူအညီနဲ့ debugging ကိုပါဝင်ပတ်သက်နှင့်ဤလွှတ်ပေးရန်စမ်းသပ်ခဲ့သူ.
တွေမှာအမှားအယွင်းမရှိပဲ lang tags များ၏ parser ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ Allow
ထိုဆက်ဆံပြီး noscript ဝှက်ထားလျက်ရှိသောအဖြစ်၎င်း tag ဖြင့်, buddypress နှင့်အတူပြင်ဆင်မှုများ bug ကို
အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ပုံနည်းလမ်းတွေကိုတရုတ်နှင့်ထိုင်ဝမ်အဘို့အ Bing ဘာသာပြန်တဲ့နှင့်အတူ translate
ငါတို့သည်သင်တို့အဒီဗားရှင်းကိုမွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်, သင်ပြုလျှင်သင်တို့ကိုငါမကျင့်လျှင်, ကိုယ့်ကိုအကြောင်းသိစေ!
သြဂုတ်လ 9, 2010 တွင် 7:30 ညနေ
အလိုအလြောကျဘာသာပြန်ထားသောပို့စ်များခေါင်းစဉ်တိုးတက်လာဖို့ option ကိုဖွစျလိမျ့မညျသောအခါ,?
TITLE: အကောင်းဆုံးက SITE
TITLE: ဆောင်းပါး 1
TITLE: ဆောင်းပါး 1 ru
TITLE: ဆောင်းပါး 1 LT
TITLE: ဆောင်းပါး 1 PL
ဒီ option ၏ရရှိမှုခေါင်းစဉ်မိတ္တူပွား၏ပြဿနာဖယ်ရှားပစ်ရန်ကူညီပေးပါမည်
သြဂုတ်လ 9, 2010 တွင် 7:40 ညနေ
ဒီလိုလုပ်ဖို့ option ကိုယနေ့ရရှိနိုင်ပါသည်, ကိုယ့ခေါင်းစဉ်မှာလက်ရှိဘာသာစကား print ထုတ်.
သြဂုတ်လ 9, 2010 တွင် 9:59 ညနေ
သြဂုတ်လ 10, 2010 တွင် 10:46 နံနက်
ငါမသိဘူး, ငါ့အဘို့ခေါင်းစဉ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင် dont ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာပုံနှိပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ. ငါပဲ့တင်သံနှင့်ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုသုံးပါ, ဒါပေမဲ့အထက်အလုပ်လုပ်သည်မ. ဒီ variable ကို print ထုတ်လုပ်နည်းမှန်ကန်သော?
သြဂုတ်လ 10, 2010 တွင် 1:14 ညနေ
သြဂုတ်လ 10, 2010 တွင် 1:16 ညနေ
သြဂုတ်လ 9, 2010 တွင် 9:43 ညနေ
အင်္ဂါရပ်များအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားဟောင်းဒေတာဘေ့စ caching ဖျက်ပစ်, တထောင်ဘာသာပြန်ထားသောစာမကျြနှာနဲ့ငါ့ဘလော့ဂ်သည်အကြီးမြတ်အင်္ဂါရပ်.
သြဂုတ်လ 10, 2010 တွင် 10:00 နံနက်
ဟေးလူ! သင်တစ်ဦးပါရမီင်! ငါပွငျသစျထဲတွင်တစ်ဦး status ကို update ကိုဝင်သောအခါ၎င်းသည်ယခု BP အတွက်အလုပ်လုပ်, ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်ပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်! သငျသညျကြှနျုပျအသကျပြည့်စုံစေကြပြီ…hehe.
သြဂုတ်လ 10, 2010 တွင် 6:28 ညနေ
သတိပေးခြင်း: require_once(wp / transposh_3rdparty.php) [function.require-တခါ]: စမ်းချောင်းဖွင့်လှစ်ရန်ပျက်ကွက်: လိုင်းပေါ် /home/avinasht/public_html/wp-content/plugins/transposh/transposh.php အတွက်ထိုကဲ့သို့သောဖိုင်ကိုသို့မဟုတ် directory ကိုအဘယ်သူမျှမ 42
fatal error: require_once() [function.require]: မအောင်မြင်ခဲ့ပါဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်သည် '' wp / transposh_3rdparty.php’ (include_path = '။:/usr / lib / php:/usr / lib / local / php '') လိုင်းပေါ် /home/avinasht/public_html/wp-content/plugins/transposh/transposh.php အတွက် 42
သြဂုတ်လ 10, 2010 တွင် 6:44 ညနေ
မေးမြန်းရမည်ဖြစ်သည် – ထိုအရပ်၌ဖိုင်?
သြဂုတ်လ 10, 2010 တွင် 6:55 ညနေ
btw, သက်ဝင်နေစဉ့် Transposh ဖို့ plugin ကိုဖိုင်တွဲအမည်ပြောင်းလဲ…တစ်ကွဲပြားမှုလုပ်ပေ?
သြဂုတ်လ 10, 2010 တွင် 7:00 ညနေ
ပဌမ, မလုပ်ပါနှင့် – ကိစ္စမရှိပါဘူး, ငါတူ directory ကိုနာမတော်ကိုအသုံးပြု, ဒုတိယ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ site ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်တူပုံရသည် (FeedBurner ဖို့ပြန်ညွှန်းပေမယ့်), အဘယ်သို့ငါပျောက်ဆုံးနေပါတယ်?
သြဂုတ်လ 10, 2010 တွင် 7:02 ညနေ
ကိုယ့်အနည်းငယ်စက္ကန့်အကြာက, ကိုယ့်အားပိတ်ပြီးနောက်တဖန် tranposh activated. ငါက default လွန်းဖိုင်တွဲအမည်ပြောင်း. ကအလုပ်လုပ်ခဲ့သောနော.
ပြဿနာအကြိမ်ကြိမ်လျှင်ငါပြန်သင်ရဦးမည်. ငါအသစ်တစ်ခု post ကိုရေးတဲ့အခါဖြစ်နိုင်ပါစေ, အားလုံးအလုပ်လုပ်ကိုင်လျှင်ကိုယ့်အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်. အချိန်များအတွက်ဖြစ်ခြင်း, feed ကိုအလုပ်လုပ်.
သြဂုတ်လ 18, 2010 တွင် 10:54 နံနက်
ငါ WordPress ကိုဒေါင်းလုပ် Monitor ကို plugin ကိုအသုံးပွုရ, ဘာသာပြန်ချက် download လုပ်နိုင်တဲ့ပြီးနောက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး.
သြဂုတ်လ 30, 2010 တွင် 12:26 နံနက်
သူတို့ကွပ်မျက်ခံရကြသည်ပြီးနောက်အများစုက plugins ကို URL များကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဖန်တီးမှုနည်းလမ်းများကိုသုံး, အချို့သော (ထိုကဲ့သို့သော buddypress အဖြစ်) ငါလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်သည်ကိုချိတ်ပေး, နှင့်အချို့သောခက်ခဲအလုပ်လိုအပ်, ကံမကောင်းရက်သတ္တပတ်၏နောက်ဆုံးစုံတွဲကိုငါအသစ်တချို့ bug တွေထည့်သွင်းနှင့်အတူအလုပ်ရှုပ်ပြီ (သည်းခံပါ, ရည်ရွယ် features တွေ) စနစ်ဖို့နဲ့သေးသင့်ရဲ့အခွအေနကိုကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ. အခြားမည်သူမဆိုကူညီနိုင်လျှင်, ငါကတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို – လုပ်ဆောင်ချက်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသင်တန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ trac ဆိုက်တစ်ခု bug ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည် (http://trac.transposh.org)
မိုက်ကယ် Feldstein ကပြောပါတယ်
သြဂုတ်လ 24, 2010 တွင် 7:06 ညနေ
ငါသည်ငါ၏အဓိကဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ Transposh သုံးပါကအလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်ဖြစ်တယ်. သို့သော်လည်းငါသည့်ဒုတိယပေါ်မှာ install လုပ်ရန်ကြိုးစား, အသစ်ဘလော့ဂ် (WordPress ကိုး. 3.0.1) ငါက activate ရန်ကြိုးစားသောအခါထို plugin ကိုတစ်ဦး header ကိုမရှိပါဘူးငါ့ကိုပြောပြမှားယွင်းမှုတစ်ခုရတဲ့စောင့်ရှောက်. ငါကြိမ်၏စုံတွဲတစ်တွဲကို plugin ကိုဖျက်ပစ်နှင့် re-install လုပ်ပြီး, အမြဲအတူတူရလဒ်များကိုနှင့်အတူ.
သြဂုတ်လ 30, 2010 တွင် 12:46 နံနက်
ဤပြဿနာကိုထဲမှာဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည် 0.6.3 ဗားရှင်း (မကြာမှီလာမည်) ယခုမူကားများအတွက်, ရုံ plugins ကိုစာမျက်နှာကနေကိုယ်တိုင် activate လုပ်ပြီး install ပြီးနောက်
Cal ဒေးဗီးစ် ကပြောပါတယ်
သြဂုတ်လ 25, 2010 တွင် 12:11 ညနေ
မိုက်ကယ်, သင်ရုံပြန်သင့် browser ပေါ်မှာ message ကိုနှင့်စာနယ်ဇင်းကိုလျစ်လျူရှုပြီးတော့ plugins ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါလျှင်သင် Transposh install လုပ်မြင်ရကြလိမ့်မည်.
ငါဖြစ်လိုလျှင် wordpress ပေါ်မှာဤသတိပေးခကျြကိုသတင်းစကားအဖြစ် plugin ကိုအပေါ်တစ်ဦး header ကိုထည့်သွင်းဖို့ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆကိုများစွာသောလူရှုပ်ထွေးစေခြင်းငှါထင်.
ငါတစျဦးကမေးခွန်းအဆုံးမှာ url ကိုဘာသာပြန်ချက်ထောက်ခံမှု .html တတ်သည်?
အလွန်ကြီးစွာသော plugin ကိုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
သြဂုတ်လ 30, 2010 တွင် 2:21 နံနက်
အ .html နှင့်စပ်လျဉ်း, ငါကမထင်, မျှော်လင့်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီးသောအတိတ်ကာလကိစ္စများခဲ့.
သြဂုတ်လ 26, 2010 တွင် 6:51 နံနက်
ဟိုင်း, ကိုယ့်အမှုကြီးကိုဖွင့်စောင့်ရှောက်လို့ပြောချင်တယ်. ငါသည်ဤ plugin ကိုတကယ်အသုံးဝင်တဲ့ရှာပြီးကြောင့်ပင်ငါ့စပိန်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးသည်.
ငါဘာသာမှတည်းဖြတ်အောင်ပါ၏သောအခါငါရှိသည်မယ်လို့အသာအဓိကတောင်းဆိုချက်ငါ့ရေးသားချက်များအတွင်းပုဒ်ဖြတ်တည်းဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုမှဖြစ်လိမ့်မယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကို website မှာစာမကျြနှာအချို့ကိုဘို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘာသာပြန်များအသုံးပြုချင်တဲ့အခါဒီအထူးသဖြင့်အရေးပါလာ. ဒါကြောင့်လက်ရှိရပ်တည်သကဲ့သို့ငါတို့သည်ပိုပုဒ်ဖြတ်တဲ့တရားမျှတတဲ့ငွေပမာဏအတူ flyer နေကြတယ်.
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်စကားကိုထပ်. ကျွန်တော်တို့ကြော်ငြာကိုမသုံးကြဘူးသော client ကိုဆိုဒ်များပေါ်မှာဤကိုသုံးသကဲ့သို့ငါတို့သည်မယ့်ဒါ link ကိုမဖယ်ရှားကြသည်၎င်းတို့၏ဆိုဒ်များပေါ်တွင်သင်၏လိုဂိုရှိသည်မဟုတ်နိုင်သကဲ့သို့လှူဒါန်းမှုလုပ်ချင်ပါတယ်. ငါ့ကိုဒီအကြောင်းသွားဖို့ဘယ်လိုသိပါစေ.
သြဂုတ်လ 30, 2010 တွင် 12:50 နံနက်
ကြော်ငြာရှိသည်နှင့်အလိုဂိုကိုဖယ်ရှားလိုမ client ကိုက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်စပ်လျဉ်း, ကလုပ်ဖို့အခမဲ့ခံစားရ, အလှူငွေနှင့်စပ်လျဉ်း, ငါအနာဂတ်အတွက်ဒီမူဝါဒပြောင်းလဲရန်စေခြင်းငှါ,, ယခုမူကားများအတွက်, သင့်ရွေးချယ်မှုမဆိုလှူဒါန်းလှူဒါန်းအခမဲ့ခံစားရ, ဒီမှာတက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါ, အရာသေးငယ်တဲ့အကောင်း wibe ဖန်တီး😉
Steve bowyer ကပြောပါတယ်
စက်တင်ဘာလ 4, 2010 တွင် 12:24 ညနေ
ငါဘာသာပြန်ထားသောတယောက်အဖြစ်ခေါင်းစဉ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပုံကို seo plugin ကို အသုံးပြု. im? ငါပွု couldnt : (
စက်တင်ဘာလ 4, 2010 တွင် 6:38 ညနေ
Transposh အဖြစ်ကောင်းစွာခေါင်းစဉ်ဘာသာပြန်ဆိုရည်ရွယ်, သော plugin ကိုသင်အသုံးပြုနေသောနှင့်သင်တို့ဥပမာတစ်ခုပေးနိုင်ပါသည်?
စက်တင်ဘာလ 5, 2010 တွင် 3:29 နံနက်
platinium seo သုံးပြီး im, သငျသညျအကြှနျုပျ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာကြည့်ရှုနိုင်,ခေါင်းစဉ်ဆဲ english များမှာ , ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါအမှားတစ်ခုခုကိုပြု?